शनिबार कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (सुचिसहित) - Rastrakokhabar
शनिबार कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (सुचिसहित)
१८ बैशाख २०७८, शनिबार १७:२७
काठमाडौं, १८ वैशाख । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ५ हजार ७६३ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । १४ हजार ४०३ जनाको पीआर परीक्षण गर्दा ५ हजार ७०६ जना र ५६६ नमुनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ५७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Previous Post	कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै
Next Post	आजको राशिफल ( वि सं २०७८ बैशाख १९ गते, आइतबार)